महिलाले यस्ता पुरुषसंग यौनसम्पर्कमा रुची राख्छन् ! जानी राखौ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक १, शुक्रबार १८:२०
सम्वन्ध वारे अनेकौं अनुसन्धान भएका छन् र ती अनुसन्धानले धेरै निष्कर्ष निकालेका पनि छ ।
यस्तैमा हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले महिलाहरू यस्ता पुरुषसंग सेक्स सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् जसको शरीरमा ठूलाठूला ट्याटु कुँदिएका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ट्याटुवाला पुरुषसंग महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको हो ।
अनुसन्धानमा साढे दुई हजार महिला र पुरुषलाई सहभागि गराइएको थियो । महिला, पुरुष दुवैले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको बताइएको छ । जवकी शरीरमा ट्याटु कुँद्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक बताइन्छ । यसले छालाको इन्फेक्सन् हुने खतरा हुने गर्छ ।
एउटै निडिलले धेरैजनामा ट्याटु कुँदिएको छ भने एचआइृभीको खतरा हुनुका साथै यसमा प्रयोग हुने रंगले क्यान्सरसम्मको डर हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । तर, अनुसन्धानले के देखाएको छ भने शरीरमा ठूला ट्याटु हुनेसंग महिला विना सोचविचार सेक्स लागि तयार हुने गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
युरेनियम के हो ? यसबाट कसरि आणविक हतियार बन्छ ? ( विध्वंसको कथा सहित)
२०७६ माघ ८, बुधबार १८:३८
राती ढिला खाना खाँदा स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ ? जान्नुहोस
२०७७ चैत्र १३, शुक्रबार २०:०४